24 Juni - 07 Julayi 2016 (IsiZulu)
24 Juni - 7 Julayi 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
AMAPAKI AMASHA ETHEKWINI
KUHLANZWE IZINDAWO NGOLWABASHA
INTATHELI YEMETRO KONKE sekume ngomumo eThekwini njengoba lilungiselela ukusingatha iNgqungquthela yeNgculazi ka-21 ezokuba mhlaka 18 kuya kumhlaka 22 Julayi 2016. Lesi yisiqineko esikhishwe nguNgqongqishe eHhovisi likaMengameli uJeff Radebe ngenkathi kunomhlangano we-Inter-Ministerial Committee nabezindaba obuseThekwini mhlaka 13 Juni 2016. URadebe ukhiphe lesi simemezelo emuva kokuba ikomidi liqede ukuhlola iNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC) kanye nezindawo ezizungeze le ndawo ukuqinisekisa ukuthi le ndawo ikulungele yini ukusingatha le ngqungquthela ebhekwe ngabomvu. Leli komidi elakhiwe ngoNgqongqoshe abangu-16, uNdunankulu waKwaZulu-Natali uWillies Mchunu kanye neMeya yeTheku uJames Nxumalo lakhiwa nguMengameli uJacob Zuma ukuqinisekisa
PRINCESS NKABANE BABALELWA ku-200 abantu abasha abakhubazekile abazokuba yingxenye yohlelo lwe-Learnership lwe-EThekwini Municipal Academy uma uMasipala usukhiphe lolu hlelo lwawo. Le learnership ngeyeContact Centre Operation NQF Level 4 kanye neyeBusinesss Administration. Lama learnership azokuba yisikhathi esiwunyaka owodwa kanti abafundi bazobe bethola imali yesibonelelo sikaR1650 ngenyanga. Lezi zinhlelo zamalearnership zihambisana nokuzibophezela koMkhandlu oHlelweni lokuQasha ngokuLingana luka-2014/2018, oluhlanganisa abantu abakhubazekile ngokomsebenzi. UMasipala ugqugquzela bonke abanomatikuletsheni, abaphase iMaths Literacy, abakwaziyo ukukhuluma isiNgisi futhi abangakaze baboshwe noma bagwetshwe, ukuba bafake izicelo. Wonke umuntu ofaka isicelo kumele kube ngokhubazekile, abe neminyaka engaphansi kuka-34, ongakaze abe yingxenye yohlelo olufanayo bese kuba ngowaseThekwini. Abantu abakhethiwe bazobhala isivivinyo sezibalo nesokufunda, ukuhlolelwa ezempilo kanye nokuqinisekise ukuthi abakaze beboshwe. UMasipala uzoxhumana kuphela nalabo abaphumele ukungena ohlwini lwabakulungele ukuba yingxenye yalolu hlelo. Ukufaka izicelo kuvalwe mhlaka 24 Juni. princess.nkabane@durban.gov.za CHARMEL PAYET NGOMHLAKA 20 Juni, iKomidi eliPhezulu laseThekwini liphasise umthetho omusha wezokuthutha i-Public Transport By-law owakhelwe ukulawula izithuthi zomphakathi eDolobheni kanti uzokhishwa kweZasegagasini Metro nakuProvincial Gazette. Njengamanje lo mthetho usalinde ukuphasiswa wuMkhandlu. Uma konke sekuphothuliwe, lo mthetho uzobe usuqala ukusebenza emuva kwezinyanga eziyisithupha ukhishwe kwiProvincial Gazette. Lezi zinyanga eziyisithupha zizobe zisetshenziselwa ukuqeqesha abasebenzi abazobe belindeleke ukuba baqinisekise ukusebenza kwawo. Inhloso yalo mthetho ukulawula indlela amatekisi, amabhasi nama-meter taxi asebenza ngayo eThekwini. Lokhu kubandakanya ukuvimbela izithuthi zomphakathi ukuma noma yikuphi. SiyiDolobha sesibe nemihlangano yokudlulisela ulwazi mayelana nalo mthetho ngenhloso yokufundisa nokwazisa zonke izinhlaka ezithintekayo. Ngaphansi kwalo mthetho nama-meter taxi awasali ngaphandle ngoba kumele abe nazo zonke izidingo zokusebenza ukuthutha umphakathi. Indlela abashayeli abaziphatha ngayo, abasizi babo kanye nabagibeli nakho kukhona ngaphansi kwalo mthetho. Lokhu kubandakanya ukusabisa nokuvimba umgibeli ukuba agibele imoto ayithandayo. Uma umuntu etholakala ephula lo mthetho, uyohlawuliswa kanzima. charmel.payet@durban.gov.za
Umthetho omusha wezokuthutha umphakathi
Amathuba omsebenzi kwabakhubazekile
ukuthi le ngqungquthela iba yimpumelelo. Njengoba sekusele amasonto ambalwa ngaphambi kokuba iTheku lisingathe le ngqungquthela, ikomidi liphinde laziswa kabanzi ngezakamuva ezithinta ingqalasizinda, ezokuphepha, ezempilo kanye nezinhlelo zonke eziphathelene nengqungquthela. ?Sigculisekile ukuthi siyizwe iNingizimu Afrika sikulungele ukusingatha le ngqungquthela nokwamukela umhlaba wonke lapho sizoqopha khona umlando ekubekeni kwelinye izinga lokulwa ne- HIV/AIDS ne-TB.? URadebe uthe le ngqungquthela izonikeza iNingizimu Afrika ithuba lokukhombisa impumelelo yayo, ukudingida ngezingqinamba ebhekene nazo kanye nokuthola izindlela ezintsha engakwazi ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane, ukwenza ngcono izinga lokutholakala kwemishanguzo kanye nokuqeda ukucwaswa kwabanegciwane. INingizimu Afrika inohlelo olukhulu kunazo zonke emhlabeni jikelele lokwelashwa kwe-HIV/ AIDS, njengoba abantu abangu-3.4 million bethola imishanguzo ye-HIV/AIDS. Le ngqungquthela yamazwe omhlaba izohlanganisa abantu abangu-20 000 okubalwa kubo izintatheli eziqhamuka emazweni angu-180. Kule ngqungquthela kuzoba khona neGlobal Village, lapho khona abantu basemhlabeni wonke bezohlangana bafunde kabanzi nge-HIV/AIDS. IMeya yeTheku uJames Nxumalo icele bonke abahlali ukuba bayamukele le ngqungquthela. UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natali uDkt uSibongiseni Dhlomo, uNdunankulu wesiFundazwe iKwaZulu-Natali uMnu uWillies Mchunu, uNgqongqoshe weHhovisi likaMengameli lezokuHlela, ukuqapha nokuHlola, uSihlalo weNgqungquthela yeNgculazi uDkt uOlive Shisana kanye neMeya yeTheku uJames Nxumalo. Isithombe: SITHUNYELWE